* Light Of Myanmar *: $20 နဲ့ $5 ပေါ်က သွေးချောင်းစီး နမိတ်
ခင်ဗျားတို့ ကြည့်ရတာ အခုမှပြည်ပရောက်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် အင်တာနက် ၀က်(ဘ)ဆိုဒါတွေအတားအဆီးကြည့်ဖူးကြပုံရတယ်။
ဒါမှမဟုတ် မြန်မာပြည်မှာ အခုမှအင်တာနက်စသုံးလို့ ရှာဖွေကြည့်ပြီး အံ့သြနေကြပုံရတယ်။ ဒီ ဒေါ်လာချိုးတာတွေက ခင်ဗျားတို့ သာအခုမှထပြီး အဆန်းလုပနေတာ…၂၀၀၂ ခုနှစ်လောက်ကထဲက ဒါတွေကလူပြောများလို့ လိုက်ခေါက်ကြည့်ပြီးတာကြာလှပါပြီလေ.
၂၀၀၂ ကထဲက တင်ထားတဲ့.ဒီဝက်(ဘ)ဆိုဒ်ကလေးသာဥပမာအနေနဲ့ သွားကြည့်လိုက်ပါလေ..
ခင်ဗျားတို့ က ၂၀ တန်နဲ့ ၅ ဒေါ်လာတန်ပဲမြင်ဖူးရှာတာကိုး..ဒါဥပမာတစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒီလို ၀က်ဆိုဒ်တွေအများကြီးပါ.
အဲဒိဝက်(ဘ)ဆိုဒ်မှာ ၂၀ တန်တင်မက ၅၀ တန်၊၁၀၀ တန်တွေမှာပါတွေ့ ရမှာပါလေ..
ဒေါ်လာ ၅၀တန်မှာ အိုဆာမာ ဆိုတဲ့စာလုံးတောင်ခေါက်ပြထားပါသလေ…
Coincident လား Conspiracy လားဆိုတာကိုယ့်ဥာဏ်ကိုလွှာသုံးပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါလေ..
၅နှစ်ကြာလို့ ရိုးအီနေတဲ့ကိစ်စတစ်ခုကို ဘယ်သူမှစိတ်မ၀င်စားတော့တဲ့အရာတစ်ခုကို အကျယ်ချဲ့ နေလို့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးမရှိပါလေ…ကိုယ့်ကျပ်ငွေကိုသာ ခိုင်မာအောင်ပြန်ကြိုးစားဖို့ နည်းလမ်းရှာကြပါစို့ လေ….
ကျနော် အဲဒီအကြောင်း သိတာ မကြာသေးပါဘူး။ ကျနော်လိုပဲ မသိတဲ့ သူတွေရှိမယ်ထင်လို့ ရေးပြတာပါခင်ဗျာ။ အစ်ကိုလို ဗဟုသုတ ပြည့်စုံနေတဲ့ သူတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဟီဟိ ဖောဝဒ် အီးမေးလ် (Forward email) ထဲက ဟာတွေ လာပြောနေတယ်။